संसद विघटनको मुद्दामा यी पाँच न्यायाधीशलाई तोकियो पेसी, को-को परे ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more संसद विघटनको मुद्दामा यी पाँच न्यायाधीशलाई तोकियो पेसी, को-को परे ?
संसद विघटनको मुद्दामा यी पाँच न्यायाधीशलाई तोकियो पेसी, को-को परे ?
पुस १० गते, २०७७ - ११:१६
काठमाडौं । संसद विघटनविरूद्ध परेका १३ रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आज संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए। ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले ती रिटको सुनुवाइ गर्दै सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएका थिए।
पुस १० गते, २०७७ - ११:१६ मा प्रकाशित